समाचार विद्यालयहरुमा नयाँ प्रविधीअनुसार पठपाठनको सम्भावना (जिशिअ शाहसँगको कुराकानी)
सुर्खेत, २१ पुष –जागरण) । सुर्खेतका ५ वटा विद्यालयहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको छ । सुर्खेत उपत्यकाका बाहिरका विभिन्न पाँच वटा विद्यालयहहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लाका पाँच वटा विद्यालयहरुको नाम पठाउन भनेको... मध्यपश्चिममा भ्रष्ट्रचारको अवस्था कस्तो छ ? (जंग बहादुर डागीसँगको गरिएको कुराकानी)
सुर्खेत, १३ पुष (जागरण) । देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था व्यापक बन्दै गइरेहेको छ । भष्ट्राचारको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुर्रुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख समेत भ्रष्ट भएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यपश्चिमाञ्चल... ध्वनी प्रदर्शन गर्ने गरि चलाइने मोटरसाइकल चालकलाई के कारवाही हुन्छ ? (सुर्खेत ट्राफिक प्रमख हर्क रावलसँगको कुराकानी)
सुर्खेत, ९ पुष (जागरण) । नेपालमा नयाँ ट्राफिक नियम गत बैशाखदेखि लागु भएको छ । तर नियम उल्लघनका घटन कम भने नभएको पाइन्छ । कतिपयले ट्राफिक प्रहरीकै कमजोरी औल्याउने गर्दछन् भने कतिपयले सवारी चालकको कमजोरी भन्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ मा... सुर्खेतमा स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? (नवराज पौडेलसँगको कुराकानी)
सुर्खेत, ८ पुष (जागरण) । सुर्खेतमा स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम यहि आर्थिक बर्षदेखि संचालन गरिन लागिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका अनुसार त्यसको लागि काम अगाडि बढेको छ । जसको लागि कार्यालय स्थापनाको काम पनि अगाडि बढीसकेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य... संविधान संशोधन प्रस्तावः राजनितिमा के पर्छ असर ? (अधिवक्ता दुर्गा सापकोटासँगको कुराकानी)
अहिले चारैतिर चर्चाको विषय बनेको छ । संविधान संशोधन कुरा यहि कुरालाई लिएर दलहरुको मित्रतामा चिसोपना आएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले पहाडी जिल्लालाई छुट्ट्याएर तराई–मधेसका जिल्ला मात्र समेट्ने गरी ५ नम्बर प्रदेशको संरचना परिवर्तन गर्दै संविधान... हिंसा न्यूनिकरण गर्न कसको भुमिका के ? (उमा पोखरेलसँगको कुराकानी)
सुर्खेत जिल्लामा अँझैपनि लैँगिक हिंसाका घटनामा कर्मी आउन सकिरहेको छैन । लैँगिक हिंसामा पनि महिला हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा ११ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । ती मध्य... हामी यसरी सुरक्षित बनाउँछौँः मोहन आचार्य (सुर्खेत प्रहरी प्रमुख)
विशेषगरी चाडपर्वको समयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा परिँदा पारिँदै पनि सुर्खेतलगायत विभीन्न जिल्लाहरुमा सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति दिनेगरी घटना हुने गरेका छन् । यसपालीको दशैँ सकिएपछि अर्को ठूलो चाड तिहार चलिरहेको छ । यसपालीको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ? अनि... सुर्खेतमा नाटक घर आवश्यकता छः गौतम
सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र कलाका लागि निकै महत्वपूर्ण र उद्गम थलोका रुपमा चिनिन्छि । यहाँबाट उत्पादन भएका कलाकारहरु व्यवसायिक बनेर राष्ट्रियस्तरमै ख्याति पनि कमाइरहेका छन् । कलाक्षेत्रभित्रकै एउटा सशक्त विधा हो नाटक । नाट्य क्षेत्रको... 1 सामाजिक संजाल